तीजमा वर्त बस्दा शास्त्र अनुसार यी ५ कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ
scheduleशुक्रवार माघ ३ गते, २०७६
हिन्दु महिलाको महान चाड हरितालिका तीजमा वर्तको आफ्नै महत्व छ । तीजमा विवाहित महिलाले आफ्ना श्रीमानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायूको कामना गरी निराहार वर्त बस्ने गर्छन् । यस वर्ष तीजको वर्त बस्ने दिन भदौ १६ गते परेको छ ।
तीजमा वर्त बस्ने क्रममा महिलाले के गर्ने/के नगर्ने भनेर हिन्दुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले तीजमा वर्तालुले निकै ख्याल गर्नुपर्छ । हिन्दु धर्ममा विशेषगरी निम्न ५ कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
१. दूध नखानुहोस्
तीजको बेलामा वर्त बस्दा दूध पिउने कार्यलाई त्यति राम्रो मानिदैन वा दूध पिउने कार्य अशुभ मानिन्छ । हिन्दु धर्म अनुसार यदि महिलाले वर्त बस्दा दूध खाएमा अर्को जुनीमा सर्पको रुपमा पुनर्जन्म लिनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
हरितालिका तीजमा व्रत बस्ने महिला रिसाउनु हुँदैन । वर्तमा रिसाउने कार्यलाई शुभ मानिदैनन् । महिलाले वर्तका दिन भगवान शिव र देवी पार्वतीलाई मन देखिनै आराधना गर्दा मनमा रिस पैदा हुँदैन ।
३. रातभर जागाराम बस्नुहोस्
वर्तालु महिलाले रातभर जागाराम बसेर भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्ने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले वर्तको दिनमा निदाउने कार्य अशुभ नै मानिन्छ ।
४. निराहार वर्त बस्नुहोस्
हरितालिका तीजमा वर्तालु महिलाले निराहार वर्त बस्नुपर्ने भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । वर्तको दिनमा खाद्यान्न मात्रै होइन, पानी समेत पिउन नहुने भन्ने प्रचलन छ । त्यसैले वर्तका दिनमा पानी नपिउनु नै राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
५. मासु र मदिराबाट टाढै बस्नुहोस्
वर्त नबस्ने महिलाले मासु वा मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन ।
यी हुन् प्राय महिलेले मनभित्र गुम्स्याएर राख्ने कुराहरू
चाया परेर हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुस् यी ५ घरेलु उपाय
होसियार ! प्रविधिले भुत्तो बनाउँदैछ दिमाग, यी आठ कुरा अवश्य ख्याल गर्नुस्
किन भन्ने गरिन्छ ? ‘महिलाको पेटमा कुरा अडिँदैन’
शौचालयको सिटभन्दा फोहोर हुन्छ धेरै प्रयोग गरिने प्लाष्टिकको बोत्तल
यी पाँच प्रकारका व्यक्तिसँग संगत नगर्नु नै उत्तम
देशभक्ति के हो ? छुटाउनै नहुने एउटा प्रसंग
एक योगी जसले विश्वविजेता सिकन्दरलाई झुकाए (प्रेरक प्रसंगसहित)
यस्ता लक्षण देखिएमा मृगौला फेल हुनसक्छ
यी हुन् सुत्नुअगाडि हरेक जोडीले गर्न नहुने ५ काम
सपनामा यस्ता महिला देख्नु निकै अशुभ मानिन्छ
बुद्धको पैतालाको त्यो निसान, जसले ज्योतिषीलाई अचम्मित बनायो
भ्रम होइन सपना, यी वैज्ञानिक तथ्यहरु थाहा पाउँदा जो कोही पनि अचम्ममा पर्छ !
पिताबाट मात्रै सिक्न सकिने ५ महत्वपूर्ण कुराहरु
ओछ्यान पुगेपछि कहिल्यै नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु
पढ्नुहोस् सरकारी कर्मचारीबीच निकै चर्चित ‘घुस्याहाको किस्सा
बिहे गर्नुभन्दा एक्लै रहनुमा तपाईको भलाई !
१२ वर्षे बालक र उसको बाबुको एक प्रसङ्ग, जसले क्रोध कम गर्न सघाउँछ !
यी ५ साना कुराले तपाईको सम्बन्धमा नयाँपन ल्याउँछ
काठमाडौं, ३ माघ । विहीबारदेखि देशभर दिउँदे वर्षा सुरु भएको छ । विहीबार दिउँसोबाट सुरु भएको बर्षा रातभरि पनि जारी छ । तीन दिनसम्म...
देशका विभिन्न भेगमा फेरि वर्षा
काठमाडौँ, ३ माघ । हिउँदे वर्षा लम्बिँदै गर्दा देशका विभिन्न भेगमा फेरि वर्षा भएको छ । चौथो चरणको हिउँदे वर्षाको यो शृङ्खला...